U ogolow Diyaaradda Atatürk inay mar kale u Furo Duullimaadyada Guriga | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulU ogolow Diyaaradda Atatürk inay dib ufuriso duullimaadyada gudaha
11 / 02 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Garoomada, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Gegada diyaaradaha ee Ataturk waxay u furan tahay duulimaadyo gudaha ah mar labaad
Khubaradan ayaa qiimeeyay amaanka duullimaadka saddax garoon diyaaradeed ee magaalada Istanbul: “Wadada labaad ee duulista waa waajib Sabiha Gökçen.” - Waa fikrad fiican, in la xidho gegada diyaaradaha ee Atatürk gabi ahaanna la gooyo ukunta dahabka ah.
Shilkii 5-tii Febraayo ka dhacay Sabiha Gökçen Airport wuxuu sababay welwel xagga amniga duulimaadka ah. Sawirrada ay diyaaradda Boeing 737 ee Pegasus, oo ka dhigtay safarka Izmir-Istanbul, kuma dul istaagi kareyn dariiqa oo ku dhacay dhul aad u adag, waxay dhalisay fasiraadyo kala duwan iyo sheegashooyin badan. DW Turkish ayaa khubaradan wax ka weydiisay nabadgelyada duulista saddexda garoon ee Istanbul.
Qaar ka mid ah khubaradii fikradihi la wadaagay DW Turkish ayaa markaa wacay oo weydiistay inaadan qorin magacyadooda. Sababtoo ah, muddadan, macallin duulista duuliyaha diyaaradda dagaal ee hore Bahadır Altan ee Pegasus ayaa la joojiyay. Altan wuxuu ajandaha ugu yimid barnaamij telefishan oo uu ka soo qaybgalay shilka kadib markii taleefanka laga saaray oo uu ka jaray telefishanka maxaa yeelay wuxuu yidhi "Sida gaari xamuul leh oo wadan jabaya ayaa qarxay". Altan wuxuu bartiisa twitterka kula wadaagay jumladaha soo socda: “Wixii aan ku iri sannado badan ma gaadhin dad aad u tiro badan. Haddii wacyigelintani ay ka hortagto shilka oo ay badbaadiso nolosha qofka, waxaan ku bixin doonaa dhammaan noocyada kala duwan ee kharashyada marar badan.
Maxuu u ordi waayaa wadada labaad?
Wasiirka gaadiidka Cahit Turhan ayaa yiri labo maalmood kahor shilka: “Waxaan heysanaa garoon orod leh oo ku yaal Sabiha Gökçen. Wadadan ayaa aad u daalan. Jid-goynta ayaa loo adeegtaa ku dhawaad ​​habeen kasta inta lagu jiro saacadaha aysan jirin duulimaadyo. Ereyadan ayaa kor u qaaday su'aasha ah sababta wadad-weynaha labaad weli uusan weli dhammaan. Sözcü Sida ku cad wararka wargeysku ka soo saaray arrintan, la-hawlgalayaasheeda AKA Construction, waxaa la aasaasay lix bilood ka dib qandaraaska, iyo shirkadaha ka shaqeeya garoonka diyaaradaha Istanbul waa isku mid: Kalyon Construction and Cengiz Holding. Wadada laamiga, oo ay ka go’an tahay in la soo gabagabeeyo 14 bilood, ayaan la dhameystirin muddo 43 bilood ah, Garoonka Diyaaradaha Magaalada Istanbul ayaa lagu soo gabagabeeyey 42 bilood.
Sabiha Gökçen ma yahay waddo-orodka kaliya ee dhowaan tagaya? Khabiir khibrad leh oo u soo gudbiyey shirkad gaar loo leeyahay ka dib markii uu ka shaqeeyey THY sanado badan isla markaana hadda bixiya tababar duulimaad, ayaa liis gareeya garoomada sida soo socota:
Waxaa ka daalay isticmaalka sagxadda; wadada tareenka oo xun taas oo ka hortagaysa taayirrada inay la xiriiraan. Tani waa curyaannimo weyn marka loo eego masaafada la soo dego. Dhibaatada ugu horumarsan ayaa ah in laga shaqeeyo xaaladaha aragtida hooseysa. ” Duuliyaha kabtanka, oo dhahaya aaladaha lagu cabbirayo dabayshu kuma filna, wuxuu farta ku fiiqay su'aasha ah in cilladahaasi khatar la yihiin iyo in kale, "Waxaa jira aalado bixin doona kuwa ugu fudud, heerarka ugu yar" sida soo socota:
“Jawaabayaasha sidoo kale waa in laga soo xushaa kuwa helay fikradaha duulista oo ku filan oo aqoon u leh. Xitaa xamaaliyeyaasha xamuulka boorsooyinka waa iney la kulmaan. Macaash ayaa loo baahan yahay markasta oo duulimaadyada lagu jiro. Weligeed laguma sameeyo salaadda, torpedo, hadiyad. ”
Madaarada dalka Turkiga, Maamulka Maddaarada Gobolka (Sama), taas oo ku xidhan adeega. Sabiha Gökçen, dhinaca kale, waxay u dirtay HEAŞ oo hoos timaada Wasaaradda Difaaca Qaranka, maadaama markii hore loo qorsheeyay dhisme militari ahaan. (Shirkadaha Duulista Hawada.) Saraakiisha HEAŞ, oo aan rabno inaan helno macluumaad ku saabsan amniga duullimaadyada garoonka diyaaradaha, ayaa naga tegay codsigeenna wareysiga oo aan laga jawaabin.
"Ma jirto wax khatar ah haddii ay jirto ogolaanshaha duullimaad"
Abdullah Nergiz, khabiir ku takhasusay duulista iyo tifaftiraha websaydhka hawada 101, ayaa ku raacsan: "Ma oran karno ogolaanshaha duullimaadku waa mid khatar ah macluumaad la'aan."
Wuxuu intaas ku daray in qofna uusan qatar gelin doonin, maadaama qulqulka ugu yar uu cawaaqib xumo kala kulmi doono: “Laakiin sidoo kale waa xaqiiq in raadraaca si dhow loola socdo. Markaa waxay u baahan tahay dayactir. Sikastaba, markii wadada labaad la furo, midka koowaad waa laxirayaa oo waa la isku dari doonaa. Markii ugu horreysay ajandaha, ayaa la sheegay inuu dhammaan doono dhammaadka 2012, ka dibna waxay dhacday sanadkii 2017 ... Weli ma dhammaan.
Maaddaama madaarka cusub aan la door bidaynin, Nergiz ma ixtiraamo fikradda ah in saami ku urursan Sabiha Gökçen sidaas darteedna wadada weyn ee laga baxo ay waxyeello gaarsiiso. Isaga oo leh duulista madaniga ahi kama gudbi karaan xadka ay go'aamisay mas'uuliyiinta adduunka, ayuu yidhi, "Tani waa 40 dhaqdhaqaaq saacaddii. Sabiha Gökçen arintaan sikastaba ugama gudbeyso.
"Daryeelid macnaheedu maahan badbaado"
Madaxweynaha Hava-Sen Seçkin Koçak ayaa sheegay inaysan jirin wax qatar ah marka laga hadlayo amniga duulimaadka. Isagoo sheegay in tareenka loo adeegsadey xoog weyn, Koçak wuxuu yiri, "Waxaad sameyneysaa kontarooladaada oo mar labaad ayaad jidka furaysaa. Waxaa jira dad saxiixa dahabka kadib macaamil kasta. Wadada labaad waa in sida ugu dhakhsaha badan loo dhammeeyaa laakiin taa micnaheedu maahan in aan khatar ahayn in la daryeelo.
Sedat Cangül, Xoghayaha Guud ee Hava-İş Union, wuxuu yidhi, "Annagu ma nihin kuwa bixiya badbaadada duulista. Waxaan ka shaqeyneynaa xuquuqda xubnaheena. ”
Gegada diyaaradaha: Jidadka jidadka waaweyn ma khaladbaa?
Gegada Diyaaradeed ee 2019-aad, oo ah tan ugu weyn ee khilaafku ka taagnaa tan iyo markii mashruuca la bilaabay, isla markaana la bilaabay hawlihii Maajo 3, ayaa si rasmi ah loogu dhalleeceeyaa Madaarka Istanbul, marka laga hadlayo nabadgelyada duulista. Runway waa udub dhaxaadka iyo digniinta. Khubaradan, oo sheegaya in jidadka dariiqa loo dhisay jihada qaldan, waxay xasuusinayaan in diyaarado badan ay ku dhaafeen passorlu ama xitaa Bursa inkasta oo aysan jirin jiilaal adag.
Duuliye diyaarad ah oo qiimeeya amniga duulimaadka khibradiisa 3 sano ka badan ayaa sheegaya in garoonka cusub, oo uu ugu yeerayo "musiibo marka loo fiiriyo meesha uu ku yaal", uu dabayl ka qaadayo marinnada dibedda ee u furan woqooyiga iyo dabaylaha qoyan ee Badda Madow, oo garsooriddoodu ay khaldan yihiin. Sababtaas awgeed, wuxuu caddeeyay inay jiraan maliyal dabayl badan oo ku xeeran isaga oo yidhi, "Meesha lagu xushay waa khalad Had iyo jeer waa 5-XNUMX darajo marka loo eego Istanbul; Meesha ay baraf badan iyo ceeryaamo badani jiraan. Laakiin intaas wixii ka dambeeya, dhulka cabirku waa miinooyinka dhuxusha. Qaab-dhismeedka carrada ayaa ku habboon qaadashada biyaha iyo dumista. Waxa uu yidhi.
Isagoo sharraxaya inay rabaan in madaarka Atatkrk lagu hayo ugu yaraan hal xagaaga iyo hal jiilaalka fagaaraha cusub, ayuu kabtanka pilot yidhi, "Maxaan u xidhnay? Waxay noqon laheyd afarjibbaarane kaas oo hadda leh 3 raad, oo aan isticmaali karno haddii loo baahdo. Wax badan ayaan dhahnay, laakiin maanu dhegaysan kari.
“Garoon diyaaradeed ayaa laga dhisayaa meel walba, illaa iyo inta si sax ah loo sameeyo”
Khabiirka duulista hawada Abdullah Nergiz ayaan aad uga walwalayn doorashada goobta. Tusaalayaal ka bixinaya Osaka, Hong Kong, South Korea iyo xusuusinta inay jiraan garoomo diyaaradeed oo laga dhisay gebi ahaanba meel ka sarreysa badda, shan kilomitir oo xeebta ka baxsan, “Meel khaldan ma jirto. Tiknolojiyadda dhismaha ayaa sidan oo kale ah oo aad ku samayn karto meel kasta. Kaliya qiimaha ayaa kor u kacaya. ” Sida laga soo xigtay Nergiz, oo aan ku raacsanayn dhaleeceynta ku saabsan dabaysha, waa wax wanaagsan in dabayl la soo dego oo la dego. Shuruudda kaliya ayaa ah in la go’aamiyo dabaylaha waaweyn iyo in loo sameeyo jihada dariiqa sida ugu habboon. "Ma dhihi karno khalad, laakiin jihada jidadka ma ahan wax fiican," ayuu yidhi.
“Albaab kama liidanno albaabka”
Madaxweynaha Hava-Sen Seçkin Koçak, isagoo oggol inay jiraan wax khaldan ama waxyaabo ka maqan, ayaa door bidaaya ilaalinta tan:
“Ma waxaa jirta fursad lagu garaaco furaha kadib maalgashi badan kadib? Waxaan jeclaan lahaa inaan halkaas lagu qaban, waxaan jeclaan lahaa inaan ahaan lahayn waddan caqli badan, laakiin ma aysan noqon. Sabiha Gökçen waa afar jibbaaran oo ay tahay inuu weynaado, waana lagama maarmaan in la isku dayo in la buuxiyo awooda garoonka diyaaradaha Istanbul adigoon madax adkaanayn. Tallaabooyin ayaa loo baahan yahay si loo dhammaystiro waxyaabaha gaagaaban. Isagu uma dulqaato dib u dhaca. Hal daqiiqo oo shidaal dheeri ah micnaheedu waa malaayiin doolar sanad walba. ”
Sida laga soo xigtay Koçak, oo yiri "Labada garoon diyaaradeed waa inay ku shaqeeyaan ugu badan", Istanbul waxay u baahan doontaa garoon kale toban sano ka dib.
Waxay noqon laheyd in la gooyo ukunta galka dahabka ah ”
Koçak, Nergiz iyo dhamaan duuliyeyaasha duulimaadyada ee fikradahooda la wadaaga waxay soo jeedinayaan in garoonka Ataturk dib loo furo duullimaadyada gudaha. Iyagoo sheegaya in ay suurtagal tahay in dib loo bilaabo duulimaadyada maxalliga ah mar kale aagga horey loogu isticmaali jiray diyaaradda xamuul, borotokoolka iyo diyaarado gaar loo leeyahay, khubaradu waxay xusuusinayaan inay jiraan garoon diyaaradeed oo ku yaal bartamaha magaalada sida magaalooyinka London, New York iyo Paris.
"Gebi gooyay goose oo dahab ah," ayuu yiri Narkisos, waxa uu sheegay in Turkey dhaqaale ma aha in jago loo sameeyo bonkörlük noocan oo kale ah. Qeybo ka mid ah maddaarka caalamiga ah ayaa xusuusinaya in la qabtay sanadihii 2015 iyo 2017, iyagoo leh, "Waxaa jira terminal gudaha ah, waxaa jira tiro duulimaadyo gudaha ah oo xadidan, labada rakaabku way nasanayaan, waqti ha lumin, iyo labada kale ee garoonka diyaaradaha" nasasho ".
Khubaradan oo sheegay in saddax garoon diyaaradeed loo adeegsan karo farsamo ahaan marka kontaroolada hawadu ay u habeysan tahay in si nabad galyo ah taraafikada loo qaado, “Waxay u muuqataa go’aan. Waxaa lagu xalliyey heshiis u dhexeeya DHMI iyo IGA. ”(Deutsche Welle Turkish)